Janaayo 21, 2021 CDI, CDD, barnaamijka daraasad shaqo: lacagta lagu bixiyo shaqaalaynta dhalinyarada waa la kordhiyay Dowlada ayaa go aansatay in ay kordhiso kaalmada gaarka ah ee lagu maal galiyo iyada oo qayb ka ah qorshaheeda soo kabashada si ay u taageerto qoritaanka dadka kayar 26 sano CDI. , CDD ugu yaraan saddex bilood, iyo sidoo kale ...
Xaaladda oo sii xumaatay, qaybta "Dhallinyarada" ee qorshaha dowladda ee lagu taageerayo waxqabadka ayaa suurtagelisay in laga fogaado burburka shaqaalaynta. Sida ku xusan warbixin ku meel gaar ah oo Wasaaradda Shaqada ay ku soo bandhigtay Golaha Wasiirada bishii Janaayo 6, 2021, in ka badan hal milyan oo ka yar 26 ayaa lagu qoray qandaraasyo joogto ah ama waqti cayiman oo ah 3 bilood ama ka badan tan iyo markii la bilaabay gunada shaqaaleynta ee gaarka ah bisha Agoosto 1, heer u dhigma midka 2019.
Dhammaan shirkadaha, iyo sidoo kale ururada, ayaa xaq u leh qorshahan. Loo shaqeeyayaashu waxay haystaan ​​afar bilood laga bilaabo taariikhda fulinta heshiiska si ay uga codsadaan Adeegyada Gobolka inay ka faa'iideystaan ​​kaalmadan lagu bixiyo shuruudaha qaarkood ee Hay'adda Adeegga iyo Bixinta (ASP). Gaar ahaan, AEJ, oo loogu talagalay Caawinta shaqaalaynta dhalinyarada, looma oggolaan karo shirkad samaysay shaqo-ka-fadhiisin dhaqaale oo ku saabsan booska ay khusayso illaa 1-dii Janaayo, 2020.
Qaddarkiisu waa 4 euro ugu badnaan shaqaalaha waqtiga buuxa, lacagaha waxaa la bixiyaa seddexdii biloodba mar marka la soo saaro shahaadada joogitaanka shaqaalaha ee loo shaqeeyaha, had iyo jeer
Janaayo 21, 2021 CDI, CDD, barnaamijka daraasad shaqo: lacagta lagu bixiyo shaqaalaynta dhalinyarada waa la kordhiyay Dowlada ayaa go aansatay inay kordhiso kaalmada gaarka ah ee lagu maal galiyo iyadoo qayb ka ah qorshaheeda soo kabashada si ay u taageerto qorista dadka kayar 26 sano CDI. , CDD ugu yaraan seddex bilood, iyo sidoo kale qandaraas of July 10th, 2021Tranquillus
READ Joojinta xiritaanka maamul ee barxadda barashada wadista ee khadka tooska ah
horeShirkadaha in ka yar 50 shaqaale ah: Mushaaraadka maaliyadeed ee "BONUS AFEST +"
socda8 faa'iidooyin lama filaan ah oo ku jira barashada luqad cusub!